Nezvedu, Embroidery Thread, Polyester Kusona Thread Fekitori
Ningbo MH Thread Co., Ltd. imwe fekitori yeNingbo MH Industry Co., Ltd. Kusona tsvimbo uye embroidery thread kugadzira kweanopfuura makore makumi maviri. Iye zvino MH ine nzvimbo nhatu dzeindasitiri ine 20㎡ nzvimbo yekudyara, vashandi ve120,000, uye yakashongedzerwa nemichina yepamusoro uye yakasimba yekugadzira manejimendi system, tinogona kupa vatengi nemhando yepamusoro tambo.
Sewing Thread Industry:
MH Sewing Thread Indasitiri yekugadzira maitiro anosanganisira: shinda kuruka, kudhaya, mhepo, kurongedza uye kuyedzwa. Polyester kushona tambo kubuda kunosvika 3000tons / mwedzi (150 * 40'HQ). Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira spun uye corespun polyester kune yakasungirirwa naironi uye waxed polyester braids, inowanikwa muhukuru hwakasiyana uye zvakatemwa kuti zvizadzise zvese zvinogoneka nevatengi. MH inopa vagadziri vepasi rese neshinda dzekusona dzezvipfeko, zvekurara, kapeti, fashoni yepamba, maindasitiri, kurongedza uye zvimwe zvigadzirwa zvakasonwa pasi rese, zvichigamuchirwa zvakanyanya nevatengi vepasirese nemhando yepamusoro pamutengo wemakwikwi.
MH Embroidery Thread Indasitiri ine yakazara seti yekugadzira mutsara wekuruka, kudhaya, kuumba uye kuumba. Embroidery shinda inobuda inosvika 500tons / mwedzi (25 * 40'HQ). Kunyanya kusimba, mashoma akabatana, ruvara rwakajeka, ruoko rwakapfava uye kukwirira kwemavara-kutsanya ndizvo zvatakavimbisa kune vatengi vedu.
Zvose MH Sewing Thread Industry uye MH Embroidery Thread Industry yakawana zvitupa zve ISO9001 uye OEKO-TEX, tinoisa pamberi pekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuderedza kushandiswa kwesimba uye teknolojia inovandudza, kushandisa zvakanyanya kushandiswa kwezvinhu zvakasvibirira, simba nemvura.